Naqshadaynta iPad Pro oo aad ugu eg Macbook Pro | Waxaan ka socdaa mac
Naqshadaynta iPad Pro-ka cusub ee 2018 waxay u egtahay waxa aan ku haysanno MacBook Pro
Apple marwalba way sheegan jirtay markii wax laga waydiiyo suurtagalnimada fog ee ipadku isugu imaanayo MacBook iyo MacBook on iPad. Maamulaha guud Tim Cook laftiisu had iyo jeer way cadahay in IPads waligood ma badali doonaan nidaamka Mac waana iyaga isku mid maahan.
Si kastaba ha noqotee, arrimuhu way isbeddelayaan xoogaa yar oo midkoodna uusan kan kale noqon doonin, midkoodna, macOS wuxuu socodsiin karaa codsiyada iOS. Haddii aan ku darno tan hirgelinta astaamaha cusub ee cusub waa macOS Mojave sida Ka soo dejinta sawirada iPhone ama iPad oo kaliya la qaaday ama la baarayo dukumiintiyada si fudud adigoo gujinaya midig Desktop, waxaan ogaan karnaa in Apple ay rabto labada nidaamba inay sii kordhaan. laakiin iyada oo aan laga dhigayn in labada sheyba ay lumiyaan muhiimadda.
Maqaalkan waxaan rabaa oo kaliya inaan maanka ku hayo qof walba wixii aan awooday inaan xalay la kulmo waana taas anigoo daala dhacaya dukaanka AliExpress waxaan awooday inaan arko sida wax walboo horeyba loogu diyaariyey imaatinka dhow ee ipad cusub Kuwo badan ayaa ahaa xogo lagu arkay shabakadda, laga soo bilaabo bixinta ilaa qorshooyinka. Waxaan yara baaray oo waxaan darsay dhinacyo gaar ah oo ka mid ah daadinta, qaababka naqshadeynta oo si buuxda ula jaan qaada daboolka difaaca ee horayba loo heli jiray iibinta AliExpress.
Naqshadaynta 2018 iPad Pro loo malaynayo inay aad iyo aad ula mid tahay waxa aan maanta ku hayno jirka MacBook Pro. Ipad-ka wuxuu ka imaanayaa naqshad yar oo wareegsan oo geesaha ku jirta iyo jirka wareegsan waa inuu qaataa naqshad cusub oo u eg waxa waxaan haysanay markii iphone 5 la sii daayay. Jidh aad u fiiqan, geedo eber ah iyo macsalaameyn badhanka Guriga iyo 3.5 dekedda qalabka codka oo doorbidaya dekedda USB-C.
Haddii ay arintu sidan tahay, Apple mar hore ayey la mid noqon laheyd tirada dekedaha aan ku leenahay 12-inch MacBooks sidoo kale waxay leedahay dekedda USB-C. Waqti ka hor ayaan sidoo kale adiga kaaga faallooday suurtagalnimada in waqtiga la dhaafay, dekedda '3.5 Jack jack' ee MacBook sidoo kale waa la waayi doonaa iyada oo la door bidaayo heerka.
Hadda, haysashada qaab wax soo saar aad u la mid ah iPad Pro ee 2018 marka loo eego kuwa hadda jira ee loo yaqaan 'MacBook Pros' iyo yaa garanaya waxa khadkaas cusub ee MacBook ee sidoo kale lagu xamanayaa uu noqon doono, Maaha wax la yaab leh in Apple ay rabto labada sheyba inay eegaan ama aad isugu ekaadaan
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » MacBook Pro » Naqshadaynta iPad Pro-ka cusub ee 2018 waxay u egtahay waxa aan ku haysanno MacBook Pro
U rogo fiidiyowyo gaagaaban qaab GIF ah Gifski
Beta afaraad ee watchOS 5.1, tvOS 12.1 oo hada loo heli karo horumariyeyaasha